Kubata - Foton Motor Group Co., Ltd.
FOTON inonakidzwa nemazita ekutanga emabhizimusi emota muChina anoita R & D yebhazi inofambiswa nesimba rakasvibirira, wekutanga kugadzira bhazi inofambiswa nehydrogen mafuta uye mota bhizimusi ine yakarebesa mashandiro mileage yemota imwe chete pasirese.
NEW ENERGY ZVIDZIDZO
Dzese dzakateedzana mota dzekutengesa, kusanganisira mutyairi wemotokari, bhazi, rori uye SPV. Mabhazi eAUV anotangira pa5.9m kusvika 18m akachengeteka, akavimbika uye mhinduro dzakasvibirira kutakura kwevanhu, kuenda uye kushanya. Kutengesa kwemotokari dzakasvibirira kwakaratidza chekutanga muindasitiri kwemakore anoteedzana. Muna Chivabvu 2016, FOTON yakahwina odha yemabhazi zana anofambiswa nehydrogen mafuta sero, akanyanya pasirese.
FOTON inokwanisa kuita R&D ye8 tekinoroji tekinoroji yemagetsi nyowani emagetsi anosanganisira powertrain kusangana, kurongedza bhatiri, kudzora mota uye kudzora mota software uye yakanyorera 1,032 zvine chekuita patent uye ine anopfuura 70% patent tekinoroji. FOTON yakabudirira kugadzira 32-bit mota inodzora, bhatiri manejimendi sisitimu uye mota yekudzvanya system, ayo akaiswa pazvinhu zvakasiyana zvigadzirwa zvinosanganisira nyowani simba bhazi uye zvigadzirwa zvemotokari. Makore 'akazvimiririra R&D inogonesa FOTON kuve neyako yehunyanzvi matekinoroji ebhatiri, mota uye emagetsi kutonga system kusangana nezvinodiwa pakuwedzera, kukwira, kukwirisa uye kuchaja kwenguva.
FOTON yakaisa mari pamusoro peRMB 23 bhiriyoni uye yakavaka yepasi rose kirasi zvirimwa zvemazuva ano uye otomatiki ekugadzira mitsara yemakore mana zvichienderana nepfungwa zero zero kubuda, hapana kubatana uye otomatiki kuburikidza nekuvandudza otomatiki, edhijitari uye akangwara ekupinza tekinoroji.
MBORO DZEMAZUVA ANO
Otomatiki yekugadzira mitsara
Robhoti unhani mutsara
13.7m bhazi electrophoresis yekugadzira mutsara
Otomatiki Welding mutsetse
Mutsetse wegungano reRobot